Xaqiiji ah oo loogu talagalay in lagu kaydi boorashka guriga
Ilaalinta Cuntada & Cuntada Noocyada Cabbitaanka iyo Talooyinka Tijaabooyinka Cuntada Mareykanka Kaydinta Cuntada Cunto-qaboojinta
Sida loo xafidayo boorashka si fiican u dabaasha ka dib
Farsamooyinka ay ku hayaan ugu fiican
Fiiriyeyaashu waxay sii wadi doonaan inay dillaacaan kadib marka la soo xiiro, * markaa marka ay timaado wakhtigii lagu kaydin lahaa, waxaad leedahay dhawr fursadood. Xaaladaha oo dhan, haddii aanay ku jiri karin geed, fersken sida ugu fiican ee ay ku fadhiisanayaan garbahooda iyo ma taaban mid kale sida lagu muujiyey. Haddii, si kastaba ha noqotee, in ay dabeecadahooda dabiiciga ah ku qulqulaan, aad u sii soco oo ku riix bacaha ama saxarada, iskuday inaad iska ilaaliso in badan oo ka sareysa kuwa kale.
Marka aad maskaxda ku hayso, go'aanso sida loo kaydiyo iyaga oo ku saleysan sida ay u bisil yihiin:
Fikrado aad u fiican
Haddii cayayaanka aad haysatid ee aad haysatid ay si fiican u bislaadaan (eeg sida loo iibsado boorashka haddii aadan hubin sida loo sheego) laakiin aadan diyaar u ahayn inaad cuno, si fudud ugu kaydi qaboojiyaha. Qabowgu wuxuu si gaabis ah u yareeyaa awooda dhirta ka baxsan. Fiiri feeraha qaboojiyaha qabta; hawada qabow ee qaboojiyaha waa fuuqbax, sidaas darteed u ilaali maqaarka maqaarka ah, calaamad ka mid ah qalajinta iyo ka weyn Bisaylkiisa. Marka la soo koobo, waa in la cuno shaashad si fiican u bislaaday marka ugu horreysa.
Haddii, si kastaba ha noqotee, fershehaagu wuxuu u istaagi karaa inuu noqdo mid fudud oo jilicsan, oo ah dheel badan oo udgoon, ku hayso miiska jikada. Waxaad xitaa u ogolaan kartaa inay ku fariistaan ​​meel qorrax leh si ay wax uga qabtaan waxoogaa yar (iska hubi in dhibtu aanay aad u kululayn).
Faleenka oo weli aad u adag oo aad jeceshahay in ay u guuraan wadada Baaskiilka , ku rid boorsada warqadda-waxay qabsan doontaa gaasta etilene oo dabiiciga ah oo si degdeg ah u dardar-galinaaya waqtigooda dhamaystirka.
Waxyaabaha Xawaaraha Sare
Wali ma aha mid kugu filan kugu filan? Ku dar muuska-riper si fiican - ama tufaax ama pear ku yaal bacda. Mirahaasi waxay bixiyaan walxo badan oo ka badan fersken waxayna isku duubi karaan fersken.
Hubi Si joogto ah
Markaad farta ku haysatid mashiinka ama aad isticmaashid habka boorsada warqadda, mar kasta oo la yiraahdo "chorus" waa bislaado hubaal inaad cunayso ama u guurto qaboojiyaha ilaa aad diyaar u tahay inaad cuno si aanad udhicin cayayaanka.
Ha u neefso
Xaaladaha oo dhan, ferskenadu waxay u baahan yihiin inay neefsadaan, sidaas darteed bacaha warqadaha ah ama bacaha balaastigga ah ee godadka lagu gooyo ayaa ah kuwa ugu khatarsan haddii aad rabto inaad ku soo lifaaqdo iyaga qaar ka mid ah. Kaliya xusuusnow, bacda warqadda ayaa ku riixi doonta baaskiilka haddii aadan ku ridin qaboojiyaha.
Wixii Dheeraad ah
Ma cuni karaan dhammaan fersken gacanta si dhakhso ah ku filan? Iska daa iyaga! Fersken qaboojiyeha waa mid cajiib ah oo alaabta la dubay iyo cabitaan iyo jalaatada . Eeg sida loo xoqdo feeraha si faahfaahin dheeraad ah.
* Fadlan ogow in mawduuca uu yahay fangaska baaluqa . Inkasta oo farsamoyaqaannada 'sifaha wanaagsan' sifaha sare, fersken oo la riixo mid aad u cagaaran, tani waxay ka horaysaa miro si buuxda qaangaadhka ah, marnaba uuna u bislaado si sax ah. Tani dhab ahaantii waa xaalad ay tahay inuu qofku la shaqeeyo dabeecadda, ma isku dayi inuu kiciyo!
Ilaalinta Cuntada & Cuntada
Xaqiiji: Farsamaynta Hagaajinta Nooca ah ee loogu talagalay Duck, Goose iyo Chork
Soft Pretzels oo ka socda Mashiinka Roodhiga
Xaqiiqooyinka Avocado, Xulashada, iyo Kaydinta
Sida loo sameeyo Salt Cod (Bacalao)
Hot Dogs, Wiener, iyo Frankfurter Talo-siinta Kaydinta iyo Karinta
Sidee Loo Baahan Yahay Geedka Garoorka Guga?
Kalluumaysiga la dubay - Kumquat Glass
Vegan Chocolate Faytansiinka Luudhka Cunnaha Lama oggola Qudhadhka
Dukaamada Jarmalka Germanet Spaetzle
Hilibka Hilibka ee ugu Fiican
Barafka digaaga ee BBQ
Top 10 Tayada Thai iyo Baradho
Talooyin Waxyaalaha Cashada Cannabiska
Samee Root Goose for Dickens Christmas
Glittery Gold Chocolate-Oreos la jarjaray
Hash Brown Casserole leh Creamy
Hilib digaag ah oo la shiiday Hawaiian
Macmacaan, stews & chili
Cuntada aan dhaqdhaqaaqi Karin Khudradda Manhajka